श्रीमानको वीर्यले अस्पताल पुराएपछि….. | Rajmarga
श्रीमानको वीर्यले अस्पताल पुराएपछि…..
यस्तो घटना निकै कम सुन्ने गरिन्छ, तैपनि घटना वास्तविक हो । क्रिस्टिन नामकी महिला आफ्नो पति सीनका कारण विरामी परेकी छन् । स्पष्ट शब्दमा भन्दा क्रिस्टिनको विरामीको कारण सीन होइनन् उनको वीर्य हो, जसका कारण यति धेरै एलर्जी भयो कि क्रिस्टिन अस्पताल भर्ना हुन बाध्य भइन् ।
यो घटना एउटा टेलिभिजन कार्यक्रम ‘सेक्स सेन्ट मी टु इआर’मा सार्वजनिक भएको हो । यो कार्यक्रममा सेक्सका कारण कुनै जोडी वा एक अस्पतालको एमरजेन्सीमा भर्ना भएको घटना प्रसारण गर्ने गरिन्छ । कार्यक्रम निर्माताका अनुसार महिला र उनका पतिका उपनाम र गृहनगर गोप्य राखिएको छ। यद्यपि महिलामा यस्तो पहिला कहिल्यै भएको थिएन ।
एउटा छोरा जन्माएपछि क्रिस्टिनलाई निकै धेरै एलर्जी र अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखियो । यसका कारण उनीहरुले झण्डै एक वर्ष सहबास नै गरेनन् । तर, सीनको जन्मदिनमा क्रिस्टिनले सहबासको इच्छा व्यक्त गर्दै श्रीमानलाई सरप्राइज दिइन् । तर, सहबासलगत्तै यो दम्पतिले अर्को ठुलो सरप्राइज पायो ।
सेक्सपछि सामान्यतः पुरुष र महिलाले लामो लामो स्वास लिने गर्दछन् । तर, क्रिस्टिनको प्रतिक्रिया निकै गम्भीर थियो । उनले आश्चर्यजनक ढंगले आफ्नो शरीर फुलेको महशुस गरिन् । शरीरमा तिब्र जलन हुन लाग्यो र स्वास लिन कठिन हुन लाग्यो । उनलाई अस्पताल लैजानुपर्ने अवस्था आयो । अस्पताल लैजाँदै गर्दा उनी बाटैमा बेहोस भइन् ।
चिकित्सकहरुले सीनको गन्धको एलर्जीका कारण यस्तो भएको हुन सक्ने आशंका गरे । तर, परीक्षणबाट भने एलर्जीको कारण अरु नै देखियो । उनलाई पतिको वीर्यको एलर्जी भएको थियो । यसले सीनलाई निकै निराश बनायो ।
आफ्नो गर्भावस्थामा क्रिस्टिनलाई पिनट एलर्जी (फुड एलर्जी) जस्तै सेमिनल प्लाज्मा हाइपरसेंसिटिभिटी उत्पन्न भएको थियो । जुन सीनको वीर्य सम्पर्कमा आएका कारण भएको थियो । यस विषयमा चिकित्सक डा. कारमेला योमटोबियभ भन्छन्–यो निकै दुर्लभ स्थिति हो । उनी लोमा लिंडा युनिभर्सिटी मेडिकल सेन्टरका एमरजेन्सी रुमका चिकित्सक हुन् ।
उनका अनुसार गर्भावस्थाका क्रममा महिलाको इम्युन सिस्टम हल्का दबिने गर्दछ । ताकी आफ्नो पेटमा हुर्कदै गरेको बच्चालाई अस्वीकार नगरोस् । यो अवधिमा यदि कुनै रोगी नयाँ प्रकारको एलर्जेन्सको सम्पर्कमा आए उक्त पदार्थले हाइपरसेंसिटिभिटी उत्पन्न गर्दछ । कुनै दुर्लभ घटनामा यो वीर्यका कारण पनि हुन सक्छ ।
यो घटनापछि एमरजेन्सी रुमका चिकित्सकहरुले क्रिस्टिनलाई जलन र सुजनाट बच्नका लागि ऐन्टीहिस्टामाइनको इन्जेक्सन दिए । पछि एलर्जी विशेषज्ञले क्रिस्टिन विरामी हुनुमा सीनको वीर्यलाई नै दोषी ठहर गरे । चिकित्सकहरुले क्रिस्टिन र सीनको जोडीलाई यौन सम्पर्क गरे पनि कण्डोमको प्रयोग अनिवार्य गर्न सुझाव दिए । एजेन्सी
Previous post: २५ प्रतिशत नेपालीमा उच्च रक्तचाप, समयमै ध्यान दिन सुझाव
Next post: यसरी घट्छ मानिसको आयु, आयु लम्ब्याउन सेक्सको कति प्रतिशत भूमिका ?
सफल दाम्पत्य जीवनका लागि यस्तो छ सात सेक्स सिक्रेट
सावधान ! साँझको समयमा यी ७ काम नगरौँ,जसले महासंकट निम्त्याउन सक्छ